Na Machị 23, 2020 Boris Johnson kwupụtara mkpọchi mbụ nke Covid-19. Anyị amaghị na nke a ga -abụ nke mbụ n'ime mkpọchi mba atọ n'ofe UK. Ọtụtụ ihe emeela kemgbe ahụ nke siri ike ikwenye na nke a bụ naanị otu afọ gara aga.
Dị ka obodo ụlọ akwụkwọ, ezinụlọ Wentworth arụkọla ọrụ ọnụ iji na -akwado ibe ha site na mkpọchi mkpọchi ọ bụla na ka anyị na -alaghachi n'ụlọ akwụkwọ, anyị nwere ike leghachi anya azụ na ókè anyị rutere wee mara na anyị bụ ugbu a akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke ọgbọ ndị ga -abịa. mụta maka. Ntachi obi na obi ike ụmụaka ahụ na -enwupụta na onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị ịdị mpako maka etu anyị siri ruo kemgbe Machị 2020. Mmụta ụlọ, oku mbugharị, na-arụ ọrụ site n'ụlọ, ịzụ ahịa n'ịntanetị, 'aka, ihu, oghere'-anyị agbagoro ya niile wee lanarị!
Ihe ncheta ndị a mara mma na -elekwasị anya na ihe dị mma gbasara mkpọchi. Iwepụta oge soro ezinụlọ na ibelata iji nwee ekele maka ihe niile anyị nwere gburugburu anyị, bụ ozi doro anya nke sitere n'echiche na onyonyo ị họọrọ ịkọrọ anyị.
Ekele dịrị gị niile ndị wepụtara oge ịkekọrịta ncheta Lockdown gị, yana kwa Oriakụ Turner maka ịhazi nchịkọta a.
Pịa maka ncheta ncheta mkpọchi anyị